Umaki: ikhalenda lokuqukethwe | Martech Zone
Umaka: ikhalenda lokuqukethwe
I-Wrike iyipulatifomu yokubambisana esetshenziselwa ukwenza lula ukukhiqizwa kokuqukethwe ngaphakathi kwenhlangano yakho. Babhekisa kulokhu njengenjini yokuqukethwe futhi bachaza izinto eziyishumi - zombili ezivela enhlanganweni nasepulatifomu - ezenza ukukhiqizwa kokuqukethwe kuphumelele kakhudlwana. Yini Injini Yokuqukethwe? Injini yokuqukethwe ngabantu, izinqubo, namathuluzi aletha okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, okubhekiswe futhi okungaguquki ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemidiya, kufaka phakathi okuqukethwe kwebhulogi, ama-webinars, ama-ebook, ama-infographics, amavidiyo
Uma usebenza enkampanini yebhizinisi, ukuhlela okuqukethwe nokwenziwa kumaphakathi necebo lakho lokumaketha jikelele. Inselelo ukuphatha imibono, izinsiza, izabelo, nokubuyekeza isimo somkhiqizo jikelele. Ipulatifomu kaDivvyHQ inikeza wonke amathuluzi adingekayo kusuka embonweni kuya ekusebenzeni. Ipulatifomu yenzelwe ukushicilelwa kokuqukethwe kanye nemithombo yezokuxhumana. IDivvyHQ iyithuluzi elisuselwa emafini, ukuhlela okuqukethwe kanye nethuluzi lokuhamba komsebenzi elenzelwe ukusiza abathengisi nabakhiqizi bokuqukethwe bathole / bahlale behlelekile futhi benze ngempumelelo ukufuna,
Ukwabelana ngokuqukethwe okuhle kuzohlala kungamandla okushayela izinkampani ukwakha ubukhona bazo online, zabelane ngezindaba zazo, futhi zihehe, zibandakanye futhi zithengise kumakhasimende. Sisebenza namakhasimende amabili njengamanje amasu awo aseshintshile futhi abengabelani ngokuqukethwe okubukwayo ngokwenhlalo futhi asikaze sikhulise ividiyo noma i-infographics… nokwehla kwesabelo sabo sezwi, izivakashi, futhi - ekugcineni - okuholayo kanye kuvaliwe ukuhlupheka. Okuqukethwe yi